Shiinaha Polyurethane warshad xabagta xabagta iyo alaab-qeybiyeyaasha | DESAY
1. Waxyaabaha: Copolymerized ka polyurethane iyo isocyanate.
2. Muuqaal: dareere viscous bunni ah.
3. Waxay ku habboon tahay smeerka gacanta, adkeysi adag, waxqabadka sarreeya, dhismaha ku habboon, xumbada ka dib xoojinta, aan dhalaalin oo aan la milmi karin, heerkulka heerkulka sare iyo hooseeya iyo wixii la mid ah.
4. Codsi: si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay soo saarida albaabada dabka, albaabada amniga, albaabada guryaha, qalabka qaboojinta nooc kasta oo saxan isku dhafan iyo dhammaan noocyada ka hortagga dabka, qalabka ka hortagga kuleylka (dhogorta dhagaxa ah, dhogorta dhoobada dhogorta leh, dhogorta muraayadda ultrafine, xumbo polystyrene ah balaastig, iwm.) isku xidhka, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa birta iyo isku xidhka.
Caddaymaha: 0.125L 、 0.5L 、 1.3KG 、 5KG 、 10KG 、 25KG
Midabka bannaanka: bunni
Waxyaabaha adag: 65%
(1) daaweyn horudhac ah: dusha sare ee xabagta ayaa la nadiifiyaa.
(2) cabirida: isticmaal xoqida sawtooth si aad uguhesho xabagta dusha sare ee xabagta si siman, sidoo kale waad isticmaali kartaa daahan duubista mashiinka, ma isticmaali karo burush burush (viscosity xabagta ayaa weyn), cadayashada cadadkeedu yahay 250g / m2, qaas ahaan xaaladda dhabta ahi waxay xakameysaa xaddiga xabagta.
(3) isku dhafan: koollada ka dib waxay noqon kartaa koolo isku dhafan.
(4) daaweynta kadib: maxaa yeelay xabagani waa xabag xumbaynaysa, markii lakabka koollada la bogsado, xabagta ayaa lagu qodan karaa daloolka yar ee xabagta, wuxuu ciyaarayaa doorka xarigga, wuxuu kordhiyaa xoogga isku xirnaanta, waana in la cadaadiyo kadib markuu bogsaday.
Magaca badeecada polyurethane xumbo koollo
Nooca PU - 90
Midabka muuqaalku waa bunni
Waqtiga daaweynta 60 daqiiqo
magaca sheyga Koollo Polyurethane Magaca sumadda deay
nooca PU Nafwaayay（MPA.S) 6000-8000
Sooc 0.125L、0.5L、1.3KG、5KG、10KG、25KG Waqtiga daaweynta 0.5-1h
Midabka bannaanka bunni Nolosha shelf 12 bilood
Waxyaabaha adag 65%
Waxay leedahay astaamaha waxqabadka sarreeya, dhismaha ku habboon, xumbada daaweynta ka dib, shubanka iyo shubanka, heerkulka sare iyo hooseeya.
Soosaarida albaabada dabka u adkaysta, albaabada ladagaalanka tuugada, albaabada guryaha, qalabka qabow, iyo waxyaalaha kala duwan ee dabka u adkaysta iyo kuleylka kuleylka (dhogorta dhagaxa ah, dhogorta dhoobada dhogorta leh, dhogorta muraayadda ah ee aadka u wanaagsan, caag xumada polystyrene, iwm.) isku xidhka Bir ahaan ku dhejinta birta.
1. Mabda'a daaweynta: xabagani waa xabag hal-qaybo ah oo aan lahayn dareeraha, kaas oo lagu daaweeyo qoyaan hawada iyo dusha sare ee dhejiska.
2.Surface treatment of adherend: ka saar saliida iyo siigada dusha sare ee dhexda. Wasaqda saliida xad dhaafka ah waxaa lagu nadiifin karaa acetone ama xylene. Haddii uusan jirin wasakh saliideed, muhiim maahan in la nadiifiyo. Waqti, haddii loo baahdo, in yar oo ceeryaamo biyo ah ku buufin dusha caag ah buufin.
Dahaarka 3.Glue: Isticmaal zagzag xoqe si aad si siman ugu codsatid xabagta dusha sare ee dhejiska. Xabagta Farsamada ayaa sidoo kale la mari karaa, laakiin cadayashada looma baahna (viscosity dufanku wuu weyn yahay), iyo xaddiga dahaarka ayaa ku saabsan 150-250g / ㎡. Dusha sare ee dhexda waxyar baa laga dhimi karaa, oo dusha sare ee dusha sare ayaa waxyar laga kordhin karaa, taas oo ah, illaa iyo inta dusha sare ee labada dheere ay kulmayaan oo ay si buuxda ula xiriiri karaan xabagta, inta ka yar xaddiga daaha, ayaa ka sii fiican, maxaa yeelay koollo badan ayaa la adeegsadaa, intay ka sii badantahay Qoyaanka ku nuugaya dusha sare ee dhegta ayaa xadidan, taas oo saameyn ku yeelan doonta waqtiga daaweynta. Haddii loo baahan yahay qaddarka xabagta la mariyey, qadar yar oo ceeryaam biyo ah ayaa si habboon loo buufin karaa.
4.compound: waa la dhejin karaa
5.Post-treatment: Sababtoo ah xabagta xumbada ee cinjirkaan, markii lakabka koollada la bogsiiyo, xabagta ayaa qodan karta micropores-ka adherend-ka, oo door kacsan leh isla markaana kordhinaysa awoodda isku xidhka. Maaddada waa la isku duubay waana la dabcin karaa ka dib marka la daaweeyo (cadaadisku wuxuu ku saabsan yahay 0.5kg-1kg / cm2).
6.Tool nadiifinta waxay isticmaali kartaa dareeraha ethyl acetate.
1 U adeegso spatula lagu nadiifiyey xoqadaha, sida saxanka fidsan. Si kastaba ha noqotee, haddii xabagta si adag loo mariyo, ma jiri doono wax xabag ah oo ku haray dusha sare ee dahaadhka. Haddii xabagta si khafiif ah loo marsado, xabagta ayaa qashin badan noqon doonta. Xoqlaha zigzag wuu adag yahay siduu yahay oo kale, oo xabagta uu ka tagay miinshaaradu waa badan tahay.
2 Labada dusha isku xidha ee la isku daro waa in lagu dhejiyaa hal dhinac.
Alaabtaan waa in lagu keydiyaa meel qabow oo mugdi ah inta lagu jiro keydinta. Guud ahaan bakhaarada gudaha, muddada keydintu waa hal sano. Isticmaal kasta oo koollo ah ka dib, foostada leh xabagta xad-dhaafka ah waa in la xidho oo la kaydiyo, iyo lakabka sare ee dareeraha xabagta ayaa sii adkayn doona oo qolof ka geli doona soo gelitaanka qoyaanka. Haddii aan la isticmaalin muddo dheer, waa in lagu xiraa nitrogen.
Hore: Manjo Manjo Manjo
Xiga: Koolada laba qaybood ah
polyurethane dareere ah
pu shaabad leh